Ku taageer waayeelka iyada oo loo marayo Qorshaha Samatabbixinta Ameerika - Cunnada Ku Lugaha
Ku taageer dadka waayeelka ah Qorshaha Samatabbixinta Mareykanka
Barnaamijyada Cunnada Gawaarida ee Twin Cities ayaa bixiya qiyaastii laba jibaar cunno intii ay ahaayeen markii uu bilaabmay Faafida COVID-19, dalabkuna hoos uma dhicin tan iyo markaas. Qoysas badan waxay sii wadaan inay la kulmaan saamaynta dhaqaale ee masiibada iyo dadka waawayn oo ka reeban.
Deeqsinimada bulshadeena ayaa naga caawisay in aan heerkan gaadhno, laakiin maalgelin dheeraad ah oo ay dawladdu ku samayso barnaamijyada sida Cuntooyinka Gawaarida ayaa muhiim ah. Waxaan ka codsanaynaa hoggaamiyeyaasheena maxalliga ah inay ballan -qaadaan kheyraadka iyada oo loo marayo Qorshaha Samatabbixinta Mareykanka si loo hubiyo in dhammaan kuwa u baahan cunto ay awoodaan inay helaan.
Maaddaama gobolku u qoondeeyay doolarka federaalka ee loo qoondeeyey Qorshaha Samatabbixinta Ameerika, waxaan ka codsaneynaa sharci -dajiyayaasha inay:
Kobcinta maalgashiga Waayeelka Ka -dhaafka ah iyo adeegyo kale oo laga tanaasulay kuwaas oo gacan ka geysanaya daboolidda qiimaha Cuntada ee Giraangirta.
Sii wad maalgashiga barnaamijyada gargaarka degdegga ah ee cuntada taas oo ballaarisay marin u helka Cunnooyinka Gawaarida inta lagu jiro aafada.
Waxaan saxiixay codsigan sababtoo ah waxaan rabaa in mas'uuliyiinta la doortay ay ogaadaan maalgelinta dadweynaha ee Cunnada Gawaarida ay lagama maarmaan u tahay caawinta waayeelka iyo dadka naafada ah inay ku noolaadaan guriga, halkaasoo ay rabaan inay ku noolaadaan. Fadlan ku taageer dadka waayeelka ah maalgelinta barnaamijyada sida Meals on Wheels iyada oo loo marayo Qorshaha Samatabbixinta Mareykanka!
Cinwaanka Jidka Magaalada Gobol ZIP
Ku dar sheeko shaqsiyeed oo ku saabsan sababta Cunnooyinka Lugaha ay muhiim kuugu yihiin:
Waxaan jeclaan lahaa inaan ka helo cusbooneysiinta emaylka Meals on Wheels